NgoMvulo, nge-13 kaDisemba ngo-2010 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 UBill Dawson
Namhlanje kuphawula i-beta yoluntu ngesixhobo esitsha sabathengisi be-imeyile kunye namaqela ayilayo, I-Emailium, isiseko sedatha yemikhankaso yokuthengisa nge-imeyile. Esi sicelo sisekhompyutheni senza iikhathalogu ngeimeyile zasesidlangalaleni, kwaye sizilungiselele ngamaShishini, iiNkampani, okanye iithegi ezichazwe ngumsebenzisi.
Inokukunceda njani le nkonzo? Makhe sijonge iimeko ezimbalwa:
Amaqela obuGcisa -Ukuba ucinezelwe indlela entsha, okanye udidekile yibhloko yoyilo eyoyikekayo, amaqela okudala anokujonga inkuthazo kwi-Emailium. Ngaba ujonge ukuhlaziya imeyile yakho yeholide? Hluza ingqokelela ngombala kunye noluhlu lomhla ukuze ubone ukuba yintoni eyenziwa ngabanye kumzi mveliso wakho.
Ababoneleli ngeenkonzo zeimeyile (ESPs) -Ufuna ukwazi ukuba yeyiphi enye i-ESP eyenzayo ngevidiyo, isabelo sentlalontle, okanye ubeko lwe-imeyile? I-Emailium okwangoku inengqokelela yeethegi zikawonke-wonke, ezivumela ukuhlelwa zii-ESPs ezinkulu, ukuze uphande.
Abathengisi -Ukuzama ukuqonda ukuba ungayifaka njani iqhosha le-Facebook "njenge", okanye yeyiphi imigca yezihloko enokufumana impendulo engcono? Hluza ingqokelela ngumzi-mveliso okanye umgca wesifundo kwaye ujonge ii-imeyile zomncintiswano.
UMthengisi - Benza ntoni abakhuphisana nabo kwiiyure zokugqibela zexesha leholide? Uyifumene ngoku-hluza ingqokelela ngomzi mveliso kunye noluhlu lomhla weholide.
utyelelo Imeyile.com ngolwazi olongezelelweyo, kwaye ubhalisele i-beta.
NgoJanuwari 26, 2017 ngo-3:03 PM
Molo oYilwayo, ndicinge ukuba kunokuba nomdla ukuqaphela ukuba i-Emailium ngoku yinkonzo yasimahla ethengiswe phantsi kohlobo lwe-imeyile ye-Creative Archive: https://www.freshaddress.com/eca/home.cfm